Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 ~ မိုးညိုသား
1:03 AM နည်းပညာ( ကိုညီနေမင်းစီက ယူလာတာပါ) No comments
Mavis Beacon Teaches Typing Platinum 20 (အကောင့်းဆုံး typing software)
တကမ္ဘာလုံးက typing tutor (လက်ကွက်လေ့ကျင့်သည့် software) တွေအားလုံး ထဲမှာဆိုရင် ရွှေတံဆိပ်ဆုရရှိထားတဲ့ software ဖြစ်သလို သင်တန်းတိုင်းမှာလည်းပဲ လက်လွှတ်လို့ကို မရတဲ့ လက်ကွက်လေ့ကျင့်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်. အထဲမှာ ပါတဲ့ step by step တစ်ဆင့်ချင်းဆီကို လက်ကွက်ရဲ့ လက်မြန်နှုန်းထားကို လိုက်ပြီးတော့မှ ချိန်ပြီးတော့ မြင့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်. ပြီးတော့ အဆင့်ချင်းတိုင်းဟာလည်းပဲ တကယ့်ကို စနစ်တကျနိုင်လွန်းပါတယ်. လက်ကွက်ပုံစံနှင့် လက်ထားရမည့်ပုံစံကိုပါ ပါရှိပါတယ်. Download လုပ်ချင်သူများ အောက်မှာ ယူလိုက်ပါ. အဆင်ပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. ကွန်ပျူတာကို typing tutor ဖြင့် စနစ်တကျ လေ့ကျင့်ထားတဲ့သူနဲ့ ကိုယ့်ဟာကို လေ့ကျင့်တဲ့သူရဲ့လက်နဲ့ မတူပါဘူး. မြန်ဆန်တာချင်းလည်း မတူပါဘူး. ကျွန်တော်နဲ့ အတူတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ graphic desinger ပိုင်းက charli ဆိုရင် လက်ညိုးနှစ်ချောင်းတည်းနဲ့ ရိုက်တာပါ. အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားပါ။ အဲ့ဒါဟာ အပြစ်ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး. စနစ်တကျ မသင်ခဲ့လို့ဆိုတာကို ညွှန်းပြတာဖြစ်ပါတယ်. ဆိုက်ကတော့ 100 MB ကျော်ပဲရှိပါတယ်. ဒါပေမယ့် download လုပ်ရတာ မြန်မာပြည်က သူတွေအတွက် အဆင်မပြေမှာ စိုးတာကြောင့် 50 MB စီခွဲထားပါတယ်.